အသေးစားဆန်စက်စက် - ဗစ်တာဆန်စက်
ဆန်သည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိအဓိကအစားအစာသီးနှံဖြစ်သည်. ၎င်းသည်ကမ္ဘာ့လူ ဦး ရေ၏ထက်ဝက်အတွက်အစားအစာဖြစ်သည်.
စပါးကို၎င်း၏ကုန်ကြမ်းပုံစံဖြင့်လူသားများမစားရ. ထို့ကြောင့်, ဆန်ရရှိရန်အတွက်သင့်တော်စွာပြုပြင်ရန်လိုအပ်သည်. တိုးတက်လာသောဆန်စက်များတွင်ပိုမိုကောင်းမွန်သောစပါးခွံနှင့်ဆန်ဖွဲနုရည်နည်းစနစ်ရှိသည်. တူညီသောအချက်မှာဆန်ဖွဲနုများနှင့်ထုထည်ကျိုးပဲ့သွားခြင်းကိုကာကွယ်ပေးသည်.
အခြေခံအားဖြင့်, ဆန်ကြိတ်ခွဲမှုမှာထွန်နှင့်စပါးစေ့များမှဖွဲများဖယ်ရှားခြင်းနှင့်ပွတ်ဆန်ထုတ်လုပ်ရန်ကူညီသည်. ထို့ကြောင့်, ရရှိသောဆန်ဖွဲများ၏အရည်အသွေးသည်ပိုကောင်းသည်. ထို့အပြင်, ဆန်စက်စက်ရုံသည်စီးပွားရေးအရအမြတ်အစွန်းများစွာရရှိသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်စပါးစိုက်ပျိုးသောဒေသ၌နေထိုင်ပါက၊, သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဆန်စက်စက်ရုံတည်ထောင်နိုင်သည်.
ဒီသေးငယ်တဲ့ဆန်စက်စက်ရုံ Destoning ၏ function ကိုရှိပါတယ်,Hulling,ကြိတ်ခွဲ,အဆင့်နှင့်ထုပ်ပိုးခွဲထုတ်. ဆန်ကြိတ်ခွဲစက်သည်အသင့်အတင့်ရှိပြီးအရောင်တောက်တောက်နှင့်ပြတ်လပ်မှုနည်းသည်။ ဆန်စက်စက်ရုံငယ်အတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်.